Ahoana no Hampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana ho an'Andriamanitra? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Mba ho ahy ny mahazo na inona na inona vita, Mila ny heviny izay aho manao zavatra lehibe. "Fa raha izaho no hahafaka izany fako avy, dia ny fako ny olona hovonjena?"Aho sary lehibe lehilahy, ary zara raha voasarika aho amin'ny antsipirihany na mandreraka asa. Indrisy, tsipiriany sy ny asa mandreraka dia ny ankamaroan'ny tena fiainana. Izany angamba no antony niady be amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, na dia rehefa lasa Kristianina aho. Ny kilasy matematika toa tsy misy ilàna azy sy ny entimody nahatsapa toy ny fandaniam-ny fotoanako.
Fantatro aho tsy irery izay azo hitany fa sarotra ny ho antony indraindray. Isika rehetra dia manana ireo herinandro izay dia mahatsapa toy ny tsy misy fiafarana tsingerin'ny ny blah. Indraindray izahay ihany no te-ho lehibe atosiky ny zava-, fa ny zavatra rehetra dia lehibe, satria ny zavatra rehetra dia ampahany lehibe amin'ny tantara. Ny tantara lehibe izay milaza ny tenany sy ny voninahiny.
Izany no marina mihitsy aza ny fanomezam-pahasoavana. Afaka halaim-panahy hieritreritra ny fanomezam-pahasoavana ho anisan'ny milaza ny tantara momba ny tenantsika. Toy ny rehetra eo amin'ny fiainana dia kely indray izay mitarika ny hafa ho taitra aminay. Rehefa solon'ny rehetra eo amin'ny fiainana dia ny toko ao amin'ny tantara lehibe ny voninahitr'Andriamanitra.
Ny fanomezam-pahasoavana ireo mba hanampy hilaza ny lehibe tantara.
Izany rehetra momba ny voninahitr'Andriamanitra
Tsaroako fony aho vao mieritreritra ny zava-drehetra izany. Nanomboka rapping fony aho tena tanora, ary izay rehetra mikasika ny dia aho rapped ny tenako. Ary tsapako fa ny zava-drehetra teo noho ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, tsy ny voninahitry ny Trip. Ity ny iray amin'ireo andinin-tsoratra masina izay tena misavorovoro ahy.
15 Izy no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso, ny lahimatoa amin'ny zavaboary rehetra. 16 Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra, any an-danitra sy ny eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na mpanapaka, na ny manam-pahefana, no nahariana ny zavatra rehetra, amin'ny alalany, ary ho azy.
Tiako ny fomba mazava i Paoly fa i Jesosy no namorona ny zava-drehetra. Tsy hamela na inona na inona avy. Zavatra an-tanety sy any an-danitra, zavatra hitanao sy ny zavatra izay tsy afaka mahita, mpanjaka sy ny mpanapaka ny samy hafa karazana, na dia ara-panahy sy ny manam-pahefana ny tafika. Taty aoriana ao amin'ny boky (ary any an-kafa) Paoly dia milaza ny ratsy fanahy toy ny mpitondra na ny manam-pahefana. Ary ny hoe izy no nahariana ny an'Andriamanitra sy ho an'Andriamanitra. Eny na dia ny demonia raha Izy no nahariana ny Jesosy, for Jesosy, dia tokoa ny fanomezam-pahasoavana dia.
Ny iray amin'ireo zavatra miavaka fa momba ny fahefana dia ny hoe Tsy mbola nisy nanolotra ho azy. Samoela niakatra manaraka toy ny mpandova. Ireo filoha dia voafidy. Polisy ireo ary nomena fiofanana ny badge. Andriamanitra irery ihany no fahefana Izay foana no nisy.
Tsy handray olon-kafa ny andraikitra. Tsy hianatra izany. Tsy maintsy ho mendrika izany. Na oviana na oviana izy voafidy, ary dia tsy ho lavina Ho. Zavatra noforonina noho ny maha-eo ambany ny fahefany sy nampiasaina noho ny fikasany tsara.
Ary noho izany, Andriamanitra tsy mikasa ny hahazo ny voninahitra avy amin'ny ampahany fotsiny amin'ny fiainanao, fa avy rehetra izany.
Ny fanomezam-pahasoavana Izy no nahariana ny an'Andriamanitra tamin'ny tanjona manokana, mba hilaza ny tantaran 'ny voninahiny.
Rehefa mividy fanaka avy IKEA, Efa fantatro ny zavatra roa: 1, izany dia mety ho lavo masina taona manaraka. ary 2, any no misy any ho maro manorotoro sy ny toromarika ao anatiny.
Moa ve tsy ho moana raha naka ny sasany amin'ireo screws izay natao ho fitoeram-boky, ary nampiasa azy ireo ho zavatra hafa? Nomena ahy ho purpose- avy amin'ny kitay hazo fisaka amin'ny screws sy tools- ary izy ireo anisan'ny fananganana izany talantalana. Ny fanomezam-pahasoavana fa ny olona tsirairay dia manana ny fitaovana ao amin'ny fitantarana Toolbox. Manokana nomena mba hilaza ny tantaran 'ny voninahitr'Andriamanitra. Dia misy mba hitondra voninahitra an'Andriamanitra.
Mety hilaza ny olona iray, ahoana ny momba ahy aza? Ahoana ny momba ny tena manokana tanteraka? Te-ho lehibe. Tsara ny lehibe indrindra azonao mandrakizay anjara milalao, dia anjara eo amin'ny lehibe sary. Ary Andriamanitra efa niantso antsika rehetra mba ho anjara.
Ahoana anefa no hahazoana ny toerana izay hampiasa ny fanomezam-pahasoavana ho voninahitr'Andriamanitra? Tsy izay rehetra manao izany tonga lafatra.
Raiki-pitia amin'ny voninahitr'Andriamanitra
Ny olana dia matetika isika no tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ho zavatra mendrika ary miady ho velona ho an'ny. Ary dia satria tsy mahita an'Andriamanitra ho be voninahitra ampy. Rehefa manomboka ny fahatakarana ny fomba Grand Andriamanitra, ianao manomboka ny fahatakarana ny antony mahatonga ny Izao Rehetra Izao tena mameno ny manodidina Azy ary Izy irery ihany.
Rehefa mamaky Isaiah 40 hitanao fa miezaka ny hitondra ny voninahiny ho anao na ny olon-kafa na inona na inona noho ny halatra kely. Izany no azy dia mendrika azy!
Manentana anareo aho mba hamaky ireo faritra ao amin'ny Soratra Masina izay olona mirehareha momba an'Andriamanitra. Isaiah 40. Hana ny vavaka ao amin'ny 2 Samuel 2. Mosesy hira rehefa mandeha ny Ranomasina Mena. Salamo 135.
Mandra-pahatonganao nofonosiny tao amin'ny voninahitr'Andriamanitra, dia tsy miraharaha ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ho Azy.
Indraindray dia sarotra ny mieritreritra ny fomba fampiasana ny fanomezam-pahasoavana fa ny voninahitr'Andriamanitra satria tsy foana mivandravandra. Tena mazava kokoa raha toa manana fanomezam-pahasoavana miteny mazava na zavatra iray izay toa ara-panahy. Na na dia ao amin'ny zava-kanto. Fa tsy toy ny mazava ny fanomezam-pahasoavana raha toa fitantanana na ny fahaiza-mandray vahiny.
I Paoly dia manome antsika fanazavana sasany any an-kafa ao amin'ny Kolosiana. Henoy izay lazainy ao amin'ny Kolosiana 3.
23 Na inona na inona ataonao, miasa amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny lehilahy, 24 satria fantatrareo fa ny Tompo no handray ny lova ho toy ny valim-pitianareo. Ianao no manompo ny Tompo Kristy.
Paoly dia tsy eo ambanin'ny ny fahatsapana fa ny fanomezam-pahasoavana ara-panjakana, na ny fanomezam-pahasoavana mba hanampiana ny ankizy, na fanomezana marina ny hanao araka ny mahazatra asa tsara dia tsy azo ampiasaina noho ny voninahitry ny Jesosy. Misy fanontaniana telo mora dia afaka manontany tena isika mifototra amin'ny izay lazainy
Ahoana no tokony hiasa? Tokony "hiasa amin'ny fo"
Afaka halaim-panahy hiasa kamo. Indrindra fa ao amin'ny zavatra izay mifandray amin'Andriamanitra ny voninahiny dia tsy tahaka ny mazava. Fa hoy i Paoly asa fo na amin'ny fonareo rehetra. Tokony hiasa amin'ny fahatsoram-po sy fahazotoana
2. Iza no miasa ho an'ny? Ianao miasa ho an'i Jesosy.
Indraindray dia afaka halaim-panahy hiasa mafy, fa ny hanao izany noho ny ratsy olona. Raha te hampifaly ny mpampiasa na ny ray aman-dreniny, na mpiara-miasa aminy. Na dia matetika isika no manam-pahefana aminay, isika amin'ny farany hampifaly an'Andriamanitra miasa tsy azy ireo. Tsy afaka mahazo ny fitiavany, fa afaka matoky azy sy hitondra azy fahafinaretana amin'ny alalan'ny fanomezam-boninahitra azy.
3. Inona no handray? Ny lovanao rehefa hamaly soa
Indraindray dia afaka ny ho tratran'ny fakam-panahy na dia hiasa mafy ho an'i Jesosy, fa mihevera loza ahy, I miasa na inona na inona. Izany no diso! Ianao miasa hampifaly an'Andriamanitra, no namaly azy. Ary isika dia hahazo valim-pitia noho ny asany, noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavany Manosika antsika hiasa amin'ny fo ary hamaly soa antsika noho ny asa tsy misy hafa amin'ny antsika. Ny karama bebe Tsy ampy ny hanorina ny fiainany, fa valisoa mandrakizay dia.
Mitetika ho voninahitr'Andriamanitra
Efa voamarikao ve ny fomba tetika ny zavatra tena isika nahafono amin'ny?
Nahita izany aho amin'ny fiainako, ary efa voaheloka noho izany. Ity ohatra. I hitranga amin'ny ho tia Sneakers. Ary ny sasany afaka fotoana koa aho nofonosiny ao aminy. Noho izany herinandro vitsy lasa izay dia nanana fahafahana handeha any amin'ny fivarotana sneaker lehibe isika raha mbola tao tanàna iray hafa, ary faly aho rehetra momba izany. Ary avy eo dia nijery tahaka dia tsy mandeha miasa avy.
Freaked nivoaka aho ary nandeha namaky be dia be ny olana mba hahatonga azy io hitranga. Aho manao antso sy ny fisainana momba ny hanova sidina, sns. Fa dia nijanona ary nanontany tena, "Nahoana?"Satria aho nahafono tao.
Tsy toa ny tetika ho an'ny zavatra izay tiantsika. Tsy mahita fomba hanaovana zavatra hitranga. Ary rehefa tia ny voninahitra avy amin'Andriamanitra hitanao hampiasa fomba rehetra sy cranny takona ny fiainanao ho azy. Izy no mendrika izany.
Ny soso-kevitro dia izao: Chase Jesosy sy raiki-pitia aminy mandra-mahita ny zava-drehetra ho toy ny fahafahana hilaza ny olona momba Azy.
Emeteria • Desambra 18, 2014 amin'ny 2:33 PM • navalin'i
Amen! I tokony hihaino izany amin'izao fotoana izao. Misaotra anao!
Keshia • Desambra 18, 2014 amin'ny 2:34 PM • navalin'i
Gordie Tamayo • Desambra 18, 2014 amin'ny 2:54 PM • navalin'i
Misaotra anao nizara. Izany no tena ilaina ary nentina am-po. G
Cameron • Desambra 18, 2014 amin'ny 8:36 PM • navalin'i
marina tokoa fa, ny zava-dehibe teo amin'ny fiainako no nataony tao fomba fijery avy mamaky ity…… Indraindray aho mahatsapa tsy hanatanteraka ny asa aho hoe hanao…..loatra ka ny tena fanomezam-pahasoavana Andriamanitra efa nitahy ahy amin'ny I ny ankamaroan 'ny fotoana mazàna no baraka…..toy izao no hanalana baraka ny tena hevitry ny asa Andriamanitra miantso ahy mba hanao sy displace ny fitiavana sy ny fanahiny tanjona ny fanompoana hanadino fa noho ny Voninahitra sy Voninahitro ihany ny antony ataoko ary manana ny maha……#blesstobecallforpurpose #
hitondra Kaputula • Desambra 20, 2014 amin'ny 4:37 aho • navalin'i
Deep bro.am Nampahery
Michael • Desambra 22, 2014 amin'ny 3:11 aho • navalin'i
'Chase Jesosy sy raiki-pitia aminy mandra-mahita ny zava-drehetra ho toy ny fahafahana hilaza ny olona momba Azy.’
Tsy nahita fomba tsara kokoa ny fomba izay mety lazaina. nanentana ny fanahy foana.
Chris • Janoary 8, 2015 amin'ny 12:23 PM • navalin'i
Great lahatsoratra Rahalahy. Ary nampahery ahy, ary nampahatsiahy ahy ny fitsipika manan-danja sasantsasany. Thats nahoana izy io no tena zava-dehibe ny hanohy ny famakiana ny soratra masina amim-pahazotoana, foana ny Baiboly manavao ny saina. Ary toy ny hoe mandeha, “Raha toa ka tsy mampiasa izany, no hahavery azy”. Zava-dehibe ny hampihatra izay ianarantsika avy amin'ny soratra masina, ary manao izany ho zatra fanao. fialam-boly, fahaketrahana, Mety hitarika ho amin'ny tolona mahantra fahazarana, rehefa ampiasaina araka ny tokony ho tsy, miteraka fahasorenana more. Ny lalana no fomba tsara indrindra foana, Christlikeness dia ny lalan'ny fiadanana sy ny fifaliana ary nanome voninahitra an'Andriamanitra.
Sammy Msiska • Janoary 21, 2015 amin'ny 11:08 PM • navalin'i
Hianao no ohatra tsara ireo olona izay mampiasa ny fanomezana rehetra mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Faly aho mahita anao tsy miteny ny teny fa koa manao izany. Aingam-panahy ahy ianao diany…hatrany Glorifyin Andriamanitra
TamekaBowen • March 2, 2015 amin'ny 5:21 PM • navalin'i
Dia mahery vaika. Ny zava-drehetra dia tena natao ho an'ny Jesosy sy Jesosy. Inona no tsara fahafahana hankahery ny filazantsara izay ny fanahintsika tanjona eo amin'ny tenan'i Kristy!! Haleloia izay mahery vaika hafatra!! :-)
Leo • Jona 24, 2015 amin'ny 6:07 PM • navalin'i
Tiako izany satria andavanandro ataoko kely be dia be ny tsara sy ny ratsy, Mankahala izany aho be dia be fa ny teny nanome ahy manantena fiovana. Tsy tokony hifantoka amin'ny zavatra tsara ataontsika, ary izany dia hanampy antsika hanatsara
Leo • Desambra 11, 2015 amin'ny 2:01 PM • navalin'i
mampino, Miderà an'Andriamanitra noho izany fitoriana, Dia niandry ela izy ireo dia afaka mandika ny horonan-tsary amin'ny teny espaniola, Mety ho tena hanampy antsika!